गरिबका लागि बनाइएका अपार्टमेन्टमा सुरक्षागार्ड र प्रहरी बिट ! | नेपाली पब्लिक गरिबका लागि बनाइएका अपार्टमेन्टमा सुरक्षागार्ड र प्रहरी बिट ! | नेपाली पब्लिक
होमपेज / फिचर | समाज |
गरिबका लागि बनाइएका अपार्टमेन्टमा सुरक्षागार्ड र प्रहरी बिट !
admin २०७६, १ असार आईतवार २०:४७
काठमाडौँ– सरकारले गरिबका लागि भनेर इचङ्गुनारायणमा बनाएको अपार्टमेन्टमा शनिबार दिउँसो पुग्दा ११–१२ वर्षका राजेश पहिलो तल्लामा खेलिरहेका थिए। मुगुका राजेश, दाइ–भाउजुसँगै बसेर पढ्न काठमाडौँ आएका हुन। उनी काठमाडौँ आएको लगभग तीन महिना पुग्यो। ‘यहाँ दाजु–भाउजु र भतिज बस्छौँ’, मुगुको सोरु गाउँपालिका स्थायी घर भएका राजेशले भने, ‘बालविकास पढ्छु।’
राजेशका दाइ–भाउजु शहरी विकास विभागका काम गर्छन्। उनीहरुलाई शहरी विकास विभागका कर्मचारी ज्ञानेन्द्र सुवेदीले त्यहाँ बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको झण्डै ६ महिना भयो। अपार्टमेन्टमा भेटिएकी राजेशकी भाउजु नन्ददेवी नेपालीले भनिन्, ‘५–६ महिना भयो यहाँँ बस्न थालेको। मुगुबाट एक वर्षअगाडि काठमाडौँ आएका हौँ। शहरी विकासका हाकिमले यहाँ बस्ने व्यवस्था गरिदिनु भएको हो।’
‘यहाँ त सुखै छ,’ नरदेवीले भनिन्, ‘पानी चाहिँ छैन। कहिलेकाहीँ परेको आकाशको पानी ट्यांकीमा जम्मा हुन्छ। त्यही पानी लुगा धुन, नुहाउन प्रयोग गर्छाैं। खान चाहिँ तीनधारामा पानी आउँछ। त्यहीँबाट ल्याउँछौँ।’ अपार्टमेन्टकै सुरक्षा गार्ड पनि त्यहीँ बस्छन्। अपार्टमेन्टको सुरक्षा गार्ड नरप्रसाद कुमाईँले अपार्टमेन्टको सुरक्षा गरेको दुई वर्ष भयो। ‘मेरो घर जुम्ला। जागिर खोज्दै गर्दा मलाई सक्षम सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनीले यहाँ ल्याइदिएको हो,’ कुमाईँले भने, ‘म र छोरा बस्छौँ। छोरा कक्षा १० मा पढ्छ।’
पाँच तला रहेको अपार्टमेन्टको पहिलो तलामा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सुरक्षा गार्ड र त्यही अपार्टमेन्टका सुरक्षा गार्ड बस्छन्। अपार्टमेन्टको भुइँ तलामा नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ को कार्यालय छ। सँगै शहरी स्वाथ्य कार्यालय पनि छ।
एक तलामा नौवटा आवास इकाई छन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सुरक्षा गार्ड र त्यही अपार्टमेन्टका सुरक्षा गार्डले दुईवटा आवास इकाई प्रयोग गरेका छन्। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ भुइँ तलामा रहेको छ। चारवटा तलामध्ये नौवटा आवास इकाई छन् भने पाचौँमा एक हल र अरु आवास इकाईहरु छन्। एउटा आवास इकाईमा किचन, लिभिङ रुम, बेडरुम, ट्वाइलेट र बार्दली पनि छ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग माताहत रहेर तत्कालीन डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले निर्माण गरेको अपार्टमेन्ट २०७२ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणमा ०६९ मा निर्माण सम्झौता भएर ०७३ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको अपार्टमेन्टमा अहिलेसम्म कोही बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छैन। गरिबहरुलाई भनेर बनाइएको अपार्टमेन्ट ‘कसलाई दिने’ भन्ने निर्क्योल नुहँदा अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको हो।
दोस्रो चरणमा सरकारले २०७२ सालमा अर्को अपार्टमेन्टका लागि निर्माण सम्झौता गरेको थियो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग माताहत रहेर तत्कालीन डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले निर्माण शुरु गरेको दोस्रो चरणको अपार्टमेन्ट निर्माणको काम पनि पूरा भइसकेको छ। तर सरकारलाई अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा त्यो अपार्टमेन्ट हस्तान्तरण भएको छैन। माथिल्लो अपार्टमेन्टभन्दा केही तल दोस्रो चरणमा बनेको अर्को अपार्टमेन्ट छ।
करिब १२ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएका अपार्टमेन्ट गरिबलाई बस्नका लागि बनाइएको भए पनि ‘कसलाई राख्ने’ भन्ने विवादका कारण प्रयोगविहीन भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले जानकारी दिए। अपार्टमेन्टमा पानीको व्यवस्था भएको छैन। विभागका अनुसार बोरिङ गरेर पानी ल्याउने तयारी गरे पनि स्थानीयको अवरोधका कारण पानीको उपलब्ध गराउने काम पूरा नभएको हो।
अपार्टमेन्टमा आकाशको पानी ‘रिजर्भ’ गर्न ट्यांकी पनि बनाइएको छ। अहिले त्यहाँ बस्ने प्रहरी, वडा कार्यालय र सुरक्षा गार्डले आकाशको सञ्चित पानीले नुहाउने, लुगा धुने, भाँडा माझ्ने गर्दै आएका छन्। अपार्टमेन्टमा आगो निभाउनका लागि पानी छ्याप्न मिल्ने गरी तयारी पनि गरिएको छ।
अपार्टमेन्टभित्र मरेका परेवाका प्वाँख र कंकाल भेटिन्छ। अपार्टमेन्टका सुरक्षा गार्ड नरबहादुर भन्छन्, ‘राति परेवा बस्न आउँछन्। राति नै बिरालो आएर परेवा मार्छ। अनि यस्तो हुन्छ।’ अपार्टमेन्टको माथिल्लो भवनमा ‘महानगरीय प्रहरी अस्थायी पिकेट, नागार्जुन नगरपालिका स्वम्भू’ बसेको छ। अपार्टमेन्टको पहिलो र दोस्रो तला प्रहरीले उपयोग गरेको छ। २०७३ सालमा स्थापना भएको प्रहरीको त्यो अस्थायी बिट पहिला भाडामा बसेको र पछि त्यहाँ सारिएको प्रहरी जवान विकास कार्कीले बताए। ‘हामी बसेको ठ्याक्कै कति भयो भन्ने त मलाई थाहा भएन’, अपार्टमेन्टमा भेटिएका प्रहरी जवान कार्कीले भने। त्यहाँ ६ जना प्रहरी बसेका छन्।
चार रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम क्षेत्रफलमा बनेको पहिलो चरणको अपार्टमेन्टका लागि ६ करोड ८१ लाख २३ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ खर्चमा १ भदौ ०६९ मा निर्माण सम्झौता भएको थियो। यो अपार्टमेन्ट ०७१ को अन्त्यतिर तयार भएर ०७२ सालमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। पहिलो चरणमा निर्माण भएको यस भवनमा १ सय २७ वटा आवास इकाइ छन्। सरकारले दोस्रो चरणमा निर्माण गरेको अपार्टमेन्ट ३ रोपनी ११ आना १ पैसा ३ दाममा फैलिएको छ। यसको निर्माण सम्झौता ५ करोड ४४ लाख ११ हजार ५ सय ३० रुपैयाँमा गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा निर्माण भएको अपार्टमेन्ट पनि पाँच तलाकै छ। यहाँ, सय आवास इकाई छन्।
शहरी विकास मन्त्रालयले शहरी गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारहरूका लागि व्यवस्थित बसोवास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७० बनाएको थियो। तर, त्यो कार्यविधि पारित भएन। कार्यविधि पारित नहुँदा गरिब छुट्याउन नसकिएको विभागका महानिर्देशक गेलालले जानकारी दिए।